I-PCB Assembly/ Abakhiqizi Bebhodi Lesifunda Eliphrintiwe | I-Best Technology
Umkhiqizi we-PCB ongcono kakhulu we-FPC, Rigid-flex, MCPCB, Ceramic PCB, kanye nomhlangano we-PCB.
I-Heavy Copper Pcb
Inani eliphakeme kakhulu lama-PCB
I-Single/double Layer Pcb
I-Extra Thin Pcb
I-Flex Pcb (Fpc)
Ibhodi Lesifunda Eliguquguqukayo
Ikhebula le-Flexible Flexible (ffc)
Nge-Hole Pcb Assembly
I-Bga PCB Assembly
Ukuhlanganisa Ikhebula Nezintambo Zokubopha
I-Led PCB Assembly
I-Mechanical Switch Assembly kanye ne-Membrane
Abakhiqizi bebhodi lesifunda abaphrintiwe be-mcpcb, i-ceramic pcb, i-pcb yethusi esindayo, i-fr4 pcb, i-pcb encane eyengeziwe, i-pcb eguquguqukayo kanye ne-pcb eguquguqukayo eqinile.
Imikhiqizo Engcono Kakhulu Yebhodi Lesifunda Ephrintiwe Ne-PCB Assembly
I-Best Technologyabakhiqizi bebhodi lesifunda ephrintiwe bangabahlinzeki besixazululo esisodwa-stop of thebest PCB umhlangano isevisi ebhodini lesifunda eliphrintiwe elivumelana nezimo, i-PCB ewumgogodla wensimbi, i-ceramic PCB, i-fr4 PCB, njll. Siyakwamukela nombuzo!
Uyazi ukuthi yini i-PCB etching?
I-Etching iyindlela yokukhipha into ethile kusetshenziswa ukusabela kwamakhemikhali noma ukuthinteka ngokomzimba.Izindlela zokudonsa zingahlukaniswa zibe izigaba zokucwilisa okumanzi kanye ne-etching eyomile.
I-Surface Mounted Technology
I-SMT ubuchwepheshe bokuhlanganisa ubuso (surface mounting technology) (isifinyezo se-Surface Mounted Technology), okuwubuchwepheshe nenqubo ethandwa kakhulu embonini yokuhlanganisa i-elekthronikhi.Ubuchwepheshe be-electronic circuit surface assembly (Surface Mount Technology, SMT), obubizwa nge-surface mounting noma ubuchwepheshe bokukhweza phezulu.Kuwubuchwepheshe bokuxhuma kwesekethe iphinikhodi ye-instno noma ingxenye ye-lead surface emfushane (SMC/SMD, ingxenye ye-chip yamaShayina) phezu kwebhodi lesekethe eliphrintiwe (Ibhodi Lesifunda Eliphrintiwe, i-PCB) noma ngaphezulu kwesinye isigatshana. , futhi ashiselwe nge-welding ephindaphindiwe noma i-immersion welding.
Ipuleti lethusi elisindayo le-8-Layer 4OZ
Liyini ipuleti lethusi eliwugqinsi le-PCB?Ipuleti lethusi eliwugqinsi liboniswa ngesikhathi sokulinda, ngomkhawulo othile wobuchwepheshe kanye nobunzima bokusebenza, futhi izindleko nazo zimba eqolo. Ungqimba lwe-foil yethusi luboshelwe kungqimba lwangaphandle lwe-FR-4. Lapho ukushuba kwethusi kungu-2oz sekuqediwe, kuchazwa njengepuleti yethusi eliwugqinsi le-PCB.Ipuleti yethusi ewugqinsi ye-PCB inomsebenzi omuhle kakhulu wokunweba, onganqunyelwe izinga lokushisa lokucubungula, indawo yokubhaka ephezulu ingasetshenziswa lapho kushaywa umoya-mpilo, izinga lokushisa eliphansi lingashintshiwe. I-brittle nezinye izindlela zokubhaka ezishisayo, kanye nokuvimbela umlilo, ukusabalala ezintweni ezingashi, i-PCB yethusi ewugqinsi ukushuba kwayo kuhlukile, izikhathi ezithile zokufaka isicelo nazo zihluke kakhulu.
Isendlalelo esine se-PCB yethusi esindayo esingu-2 OZ sivela kubuchwepheshe obungcono kakhulu e-China
Ekuqinisekiseni i-PCB, ungqimba lwethusi luboshelwa endaweni engu-fr-4. Lapho ukujiya kwethusi ≥ 2OZ kwenziwa, kuchazwa njengepuleti yethusi eliwugqinsi. Ubukhulu bayo buhlukile, indawo yangempela esebenzisekayo nayo ihluke kakhulu.
Ibhodi le-PCB elinezingqimba ezingu-10 livela kubuchwepheshe obungcono kakhulu e-China
Ibhodi lesekhethi enezingqimba eziningi ngokuvamile lichazwa njenge-10-layer —— 20-layer noma ngaphezulu, okunzima kakhulu kunokucubungula ibhodi lesifunda elinezingqimba eziningi, izidingo zalo zekhwalithi nokuthembeka ziphakeme, ikakhulukazi ezisetshenziswa emishinini yokuxhumana, ephezulu. -amaseva okuphela, i-electronics yezokwelapha, izindiza, ukulawula izimboni, ezempi kanye neminye imikhakha.
I-Single Sided Thick Film Ceramic PCB
Ibhodi lesekethe yefilimu eliwugqinsi, elaziwa nangokuthi ibhodi lesifunda eliyi-hybrid, lakhiwa ngokuphrinta isikrini ku-substrate yezinto ezihlukile. I-substrate ngokuyinhloko i-96% ye-alumina ceramic materials.
I-Single Sided Thick Thick Film Ceramic PCB
Umkhiqizi ochwepheshe eChina ngokwenza ifilimu ewugqinsi yobumba be-ceramic.I-PCB yefilimu ewugqinsi, i-Ceramic PCB
I-Double Sided Thick Film Ceramic PCB
Umkhiqizi ochwepheshe eChina ngokwenza ifilimu ewugqinsi yobumba be-ceramic.
Umkhiqizi We-Pcb Ongcono Kakhulu Ngezinsizakalo Zomhlangano
IUmkhiqizi we-PCB omuhle kakhulu igxile kwisixazululo sokumisa okukodwa ebhodini lesifunda eliphrintiwe ngokwezifiso kanyeUkuhlanganiswa kwe-PCB.
Kusukela ekuqaleni, njengoba ephrintiwe wesifunda ibhodi nomkhiqizi kanye bestUkuhlanganiswa kwe-PCB isevisi e-Asia, Ubuchwepheshe Obungcono Kakhulu bunikezelwe ekubeni umlingani wakho ongcono kakhulu wangaphambili, amabhodi wesifunda aphrintiwe ngokunemba okuphezulu, njengamabhodi ethusi esindayo, i-PCB encane kakhulu, izendlalelo ezixubile, i-TG ephezulu, i-HDI, imvamisa ephezulu (Rogers, Taconic) , ibhodi elilawulwa yi-impedance, i-Metal Core PCB (MCPCB) njenge-Aluminium PCB, i-Copper PCB, ne-Ceramic PCB (i-conductor Copper, i-AgPd, i-Au, njll) njalonjalo.
Eyethuabakhiqizi bebhodi lesifunda ephrintiwe ungahlinzeki nge-PCB kuphela& Ukukhiqiza kwe-MCPCB, kodwa futhi kufaka phakathi ukuphindaphinda kwe-PCB, Ubunjiniyela& ukwakhiwa kwenqubo, ukuphathwa kwezingxenye& isixazululo sokuthola isisombululo, umhlangano we-PCB wasendlini& ukuhlanganiswa kwesistimu okugcwele, kanye nobuchwepheshe obufakwe phezulu (SMT), ukuhlanganiswa kwemikhiqizo egcwele& ukuhlola.
I-Best Technologyabakhiqizi bebhodi lesifunda eliphrintiwe abanolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-15, phendula njalo emahoreni angu-12, ngenkonzo yomhlangano we-PCB ehamba phambili ngentengo enhle.
Ikhwalithi ye-PCB iwumgogodla wemikhiqizo. Bonke onjiniyela& Abafana bomnyango obalulekile banesipiliyoni seminyaka engaphezu kwemihlanu embonini ye-PCB, silandela ngezinga elimisiwe le-PCB, kanye nesicelo esikhethekile samakhasimende.
Iningi lonjiniyela bethu kanye nabaqhubi linesipiliyoni seminyaka engaphezu kweshumi embonini ye-PCB, ngakho-ke singakwazi ukukhiqiza okukhethekile njengebhodi lethusi elisindayo le-OZ, i-4 layer ye-MCPCB, njll.
Sithenge imishini eminingi esezingeni eliphezulu, esezingeni eliphezulu& amadivaysi okukhiqiza i-PCB, nokuhlola, ukuthuthukisa ikhwalithi yamabhodi ethu.
Siyaqhubeka nokuthuthukisa i-MCPCB yethu, i-FR4 PCB& I-FPC& Amazinga wokukhiqiza we-Ceramic PCB ukuze uthole imiphumela egculisayo kumakhasimende nakithi.
Mayelana ne-Best Technology ephrintiwe abakhiqizi bebhodi lesifunda
Isiqinisekiso Sekhwalithi Yebhodi Lesifunda Ephrintiwe Ngokwezifiso
I-Best Technology custom pcb manufacturer, eyasungulwa ngoJuni 28, 2006, yinkampani ebhalisiwe yase-Hong Kong egxile kumhlinzeki wesisombululo esisodwa se-FPC, i-Rigid-flex PCB, i-MCPCB, i-FR4 PCB, i-Ceramic PCB, i-PCB ekhethekile efana ne-Heavy Copper ( kufika ku-20 OZ), i-PCB ezacile eyengeziwe (0.10, 0.15mm), kanye nesevisi yokuhlanganisa ye-PCB.
Kusukela ekuqaleni kwayo, njengomthengisi webhodi lesifunda eliphrintiwe (PCB) e-Asia, Ubuchwepheshe Obungcono Kakhulu bunikezelwe ekubeni nguzakwethu ohamba phambili we-PCB womkhiqizi wamabhodi esekethe aphrintiwe asezingeni eliphezulu, anembayo, njengamabhodi ethusi esindayo, i-Ultra-thin PCB, exubile. izendlalelo, i-TG ephezulu, i-HDI, imvamisa ephezulu (i-Rogers, i-Taconic), ibhodi elilawulwa yi-impedance, i-Metal Core PCB (MCPCB) njenge-Aluminium PCB, i-Copper PCB, ne-Ceramic PCB (i-conductor Copper, i-AgPd, i-Au, njll) njalonjalo.
Asihlinzeki nge-PCB kuphela& Ukukhiqiza kwe-MCPCB kodwa kufaka phakathi ukuphindaphinda kwe-PCB, Ubunjiniyela& ukwakhiwa kwenqubo, ukuphathwa kwezingxenye& isixazululo sokuthola isisombululo, umhlangano we-PCB wasendlini& ukuhlanganiswa kwesistimu okugcwele, ubuchwepheshe obufakwe phezulu (i-SMT), nokuhlanganiswa kwemikhiqizo egcwele& ukuhlola.
Ikesi Lebhodi Lesifunda Eliphrintiwe Ngokwezifiso
NgoJulayi 11, saba nekhasimende elihle elivela eJalimane elisivakashele
Ngomhla ziyi-11 kuJulayi, sibe nekhasimende elimangalisayo elivela eJalimane elisivakashele namhlanje ekuseni, empeleni u-Peter, umphathi wethu jikelele kanye no-Tiffany, umthengisi wethu osanda kuvakashela inkampani yakhe ngenyanga eyodwa edlule e-Frankfurt. Ngalesi sikhathi iKhasimende livakashele ihhovisi lethu, i-FPC, imboni ye-SMT futhi ladla isidlo sasemini esimnandi nathi. Ngaphezu kwalokho, usinikeze amaphrojekthi amaningi ahlanganisa ne-Ceramic PCB.Siyabonga ngokuseseka kwakhe okukhulu futhi sizozinikela ekunikezeni amakhasimende ethu imikhiqizo namasevisi anelisa ngokwengeziwe.
Besinekhasimende elilodwa elivela e-US elisivakashele ngoJulayi 25, 2019
Sibe nekhasimende elilodwa elivela e-US elisivakashele ngoJulayi 25, 2019. Lavakashela ifekthri yethu ye-SMT ne-FPC futhi lajabula ukubona izisebenzi zethu ezinokuhlangenwe nakho kuworkshop ecacile, imikhiqizo yokulethwa okusheshayo enokuqinisekiswa kwekhwalithi.
Isiko lase-Australia laxoxisana ngephrojekthi yakhe ne-Best Technology
Elinye lamakhasimende ethu amangalisayo, livakashele inkampani yethu ngo-April 3, 2019.Ikhasimende lithe i-Best Technology yaziswa kakhulu njengomphakeli oyigugu wemikhiqizo yekhwalithi enhle kakhulu ehlangabezana nezidingo zayo ngqo.Wedlula izidingo ze-PCB ezizodingeka ezidingweni zabo zamanje zokukhiqiza futhi wasinikeza izilinganiso zomkhiqizo ezidingekayo kulawa maphrojekthi.
THINTANA NOMKHIQIZI WE-PCB Ongcono Kakhulu
Vele ushiye i-imeyili yakho noma inombolo yocingo efomini lokuxhumana ukuze sikuthumelele i-quote yamahhala yohlu lwethu olubanzi lwemiklamo!